Imvula idale umonakalo eLimpopo | IOL Isolezwe
Imvula idale umonakalo eLimpopo
Isolezwe / 25 January 2013, 10:25am / INTATHELI YESOLEZWE
BABUTHELWE emahholo abantu ababe ngondingasithebeni ngenxa yezikhukhula ezihlasele isifundazwe iLimpopo kulezi zinsuku. Lapha uMnuz Johannes Makgato wasepulazini iSoul Smemetla, kuphoqeleke ukuthi ashiye konke abaleke namadodana akhe uPhoko noPhumulo kwesokunxele. Isithombe: ANTOINE DE RAS
ISHIYE kukhalwa imvula enamandla ebihambisana nezikhukhula ezinzima esifundazweni iLimpopo kusuka ngempelasonto okuholele ekufeni kwabantu abayishumi.
Abantu abashonile bane endaweni ebizwa ngokuthi yiMopani nabayisithupha eVhembe. Kwabashone eVhembe kukhona namalungu omndeni owodwa amane adabuka eMusina aguguleke nemoto abehamba ngayo.
Abantu abangu-95 batakulwe esiqiwini i-Kruger National Park. Eminye imibiko eqhamuka kwelaseMozambique ithe uhulumeni wakuleliya lizwe umemezele ukuthi kumele kuxwaywe imifula ngoba izinga lamamzi bese likhuphuke kakhulu kunalokhu okwejwayelekile obekungadala ukuthi kube nezikhukhula.
Isimo kuthiwa sibucayi kakhulu eLimpopo Valley eningizimu nesifundazwe eGaza njengoba isilinganiso sezikhukhula sesikhomba ukuthi kungase kubuye lezo ezabhubhisa imizi yabantu enhlakeleleni yango-2000.
Yize kunjena izelamani zaseMusina uCathrine noRuth Sematla zikholwa ukuthi zinenhlanhla njengoba zisadla anhlamvana.
Bebeyingxenye yabasebenzi basepulazini abangu-50 abahlale izinsuku ezimbili benombele emishinini yokulima yepulazi bebalekela izikhukhula namanzi abedla izindwani ngaphansi kwabo.
Abantu bagibele phezu kwezindlu bebalekela ukuminza abanye bakhuphukela ezintabeni njengoba izindlu zabo bese zidilikile, izihlahla ziwe phansi kanti imifula ibigola izintethe amanzi esecekela phansi imigwaqo.
Ngesikhathi umfula waseMusina lapho kusebenza khona uCatherine noRuth ugcwala ukapakela ngaphandle kube wubutatata kubantu abasebenza epulazini, iningi labo okungelesi-fazane, kuyogitshelwa emshinini wokuhlanza amazambane kubelethwe izingane emhlane.
Abasebenzi baze batakulwa ngamaphoyisa endiza enophephela emhlane ngoMsombuluko ntambama.
Balinganiselwa ku-300 abantu abafike ikhanda emahholo akuleya ndawo abasale dengwane ngenxa yesikhukhula. Okhulumela abezimo eziphuthumayo nezinhlekelele, uMnuz Dieketseng Diale, uthe amathimba abo asephumile ukuzama ukutakula kanti sekunikelwe ngamaphasela okudla angu-240 namatende angu-20 kuhlanganisa nezingubo zokulala ezingu-275 eVhembe.
Kutakulwe abantu abangu-181 ngoMsombuluko kwathi abangu-76 batakulwa izolo ezintatha. Kulaba kukhona nabebehelelwa okudingeke ukuba kusetshenzwe kanzima ukuthi bathole usizo lokubelethiswa yize isimo besimanzonzo.